Ọganihu na mberede na ọnụọgụ obodo na mmụba nke obodo ahụwo nnukwu mmụba na mkpa maka italslọ ọgwụ, ọfịs, ebe ịzụ ahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ. Iji gbakwunye na nke a, Mgbanwe Ihu Igwe emeela ka HVAC bụrụ ihe dị mkpa maka nri na ahụike dị mma maka ọnụ ọgụgụ na-eto eto na obodo.
Ike ịrụ ọrụ ugbu a bụ isi ihe dị mkpa maka nrụnye HVAC ọhụrụ. Gọọmentị n'ụwa niile ewebatala iwu ndị enyere iji kwado usoro HVAC nke na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka arụmọrụ na-arụ ọrụ ike.
Hlọ ọrụ HVAC bụ isi ndị ahịa nke Energy na Mmiri, n'ihi ya, ọ na-eche ọdịnihu dị mma na ọganihu na teknụzụ nwere ọgụgụ isi. Ndị a gụnyere sistemụ maka inyocha ike ụlọ na ijikwa ike ume nke sistemu HVAC.
Nke a bụ ebe ngwaahịa SPL na-arụ ọrụ kachasị, ma ọ bụ maka ikpo ọkụ, ikuku, ikuku oyi ma ọ bụ obi jụrụ, SPL nwere ezigbo mgbanwe mgbanwe okpomọkụ. Maka District Cooling systems to Industrial Process Solutions, akụrụngwa anyị na-ahụ maka nchekwa na nchekwa mmiri maka ndị ahịa ya.
Iji ghọtakwuo ngwa ahụ, biko kpọtụrụ Onye na-anọchite anya anyị.